Sidee loo dhaqmaa, haddii nin uu guuro?
Cilmi-nafsiga iyo Xiriirka Jacayl
Nolosha ku soco, gacanta ku hayso riyada aad jeceshahay in badan, laakiin tani macquul ma aha qof kasta. Inta badan, dhibaatada waxaa lagu xallin karaa bilowga, laakiin sababo tallaabooyin aan fiicneyn ayaa aad u sii xumeynaya, wax walbana waa ay ku dhammaanayaan farqiga. Maxay tahay sababta nin caadi ahaan uga baxa haweeney, waxa la sameeyo, haddii ay tani dhacdo iyo sida loo dhaqmayo maaha mid u qalantaa - waxaas oo dhan way ka baran karaan maqaalkeena.
Maxay qofku uga guurayaan haweeney?
Marka hore, way fiicnaan laheyd inaad fahamto waxa aad macnaheedu tahay masaafada. Haddii aad caado u tahay inaad wacdo saacad kasta, ka dibna gurigeeda ha siin daqiiqad qarsoodi ah, waa wax la yaab leh in nin doonayo inuu naftiisa gooyo ugu yaraan waqti yar. Waxay noqon doontaa nasasho sharci oo ka badan masaafad.
Murugo . Isku day arrin kale, haddii aysan jirin wax isbeddel ah oo ku saabsan xiriirka, laakiin ninka ayaa weli qarsoodi ah, joojiyay ka doodista wixii hore u ahaa mawduuca sheekada. Sababta dabeecadani waxay noqon kartaa muuqaalka kicinta cusub ama dhibaatooyin adag oo uusan rabin inuu culays kaa saaro.
Daal . Suurtagalnimada daal caadi ah, oo la xidhiidha cadaadis aad u liita, waa in aan la dhigin.
Isku dheji kicin kale . Sidoo kale waxaa habboon in la fahmo in shaashadda xilliyadeed ee xiriirka aysan ahayn wax dabiici ah, masaafo yar oo caadi ah, xitaa haddii ay u muuqato inaad si kale u aragto. Ka dib marka aad u weynaato, marwalba way yar tahay, iyo awooddaada si aad si dhakhso ah u sameyso.
Raac . In badan oo aan ahayn, haweenku, waxay dareemeen khilaaf yar, waxay isku dayayaan xooggooda oo dhan si ay u kiciso saaxiibtinimadeeda, oo aan loogu yeedhin mid sax ah. Xasuuso mudada aad rabto in aad la xiriirto qof kasta, waxaad sidoo kale u lahaan laheyd cidhiidhi. Sidaa daraadeed, wixi ugu wayn ee xaalad sidan ah waa inaad ninkeeda siisid wakhti gaaban si uu u xalliyo fikirkiisa. Dabcan, kahor tani, waxaa habboon in la tixgeliyo waxa sababi kara shisheeyahaas, waxaa laga yaabaa in eeddaada soo socota.
Si toos ah ugala hadal dhibaatada . Su'aasha ah waxa la sameynayo haddii nin uu guuro muddo gaaban, iyo sida loola dhaqmo kiiskan, waa mid dabiici ah. Waxay sidoo kale ku fiicnaan lahayd in la ogaado waxa dabeecadani ku saabsan tahay. Kaliya waa lagama maarmaan in la sameeyo taas oo aan ahayn su'aalo joogta ah, taas oo ugu dambeyntii u horseedi doonta isaga oo isku dheelitiran. Ka caawi qofka aad jeceshahay inuu ku nasto, xaaladdan, daqiiqado badan lama dareemo mid aad u ba'an, sidaa darteed rabitaanka in laga hadlo dhibaatooyinka ayaa soo bixi kara. Haddii aad bilowdid dhageysiga, muujiya ka qayb galka dhabta ah, isku day in aad la soo baxdo siyaabo ka baxsan xaalad adag, oo ha dhihin in dhammaan arrimahan ay tahay wax micno ah, oo uu u yimaado gobolka la dulmiyay sababtoo ah faahfaahinta aan yarayn.
Sidee loo xiraa nin?
Sidee u iloobi kartaa nin?
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan ragga
Sidee baad u tijaabisaa nin inuu dareemo?
U raacsanaanta magacyada guurka
Waa maxay nooca haweenku u jecelyihiin ragga?
Sidee loo qaataa nin xaas leh?
Ereyada taageerada loo jecel yahay
Tayada ragga ee jecel dumarka
Saaxiibnimada u dhaxeysa nin iyo gabar
Haddii uu nin jecel yahay oo ka caroodo ...
Al Pacino xaaskiisa
Calaamadaha cagaarshow ee qof weyn
Vitamin C uurka
Joodarka haweenka oo leh xarig
Maxay noqon kartaa heerkulka macaamilka xanaaneynta?
Timaha quruxda leh ee la jiido
Buuxinta dhirta - fekerka ugu fiican ee buuxinta saxanka aad ugu jeceshahay
Tabeelid Sports Illustrated waxay doorteen jaan-gooyska jimicsiga-18-dabeecada dheeraadka ah
Kara Dellevin iyo Paris Jackson waxay ka xanaajiyeen sheekooyin riwaayad haween ah
Sidee loola jeexi karaa bisad inuu jeexo kursi fadhiga?
Cunto ka timid cellulite - liiska 10 maalmood
Eggplant - koray dibedda
Habka Boqortooyada - fikradaha iyo xeerarka aasaasiga ah ee gudaha
Waa maxay riyadu riyootaa?
Jiilaalka quruxda badan - dayrta-qaboobaha 2016-2017
Kate Middleton ayaa iska indho-tiray xeerka sirta ah ee xafladda BAFTA-2018
Chops Chops - Recipe
Jeegagga hoos u dhigta haweenka
Red ka baxo on strawberries - sababta
Baakad kamaradaysa SLR
Cunto loogu talagalay cake "Monastic Hut"